Indlu yeendwendwe - I-Airbnb
Ifama sinombuki zindwendwe onguTatiana
Kwindlu yethu epholileyo yeendwendwe zaseRussia usoloko wamkelekile! Le ndlu ikwindawo encinci yokuhlala edolophini kwindlela eya echibini laseBaikal, malunga neekhilomitha ezingama-26 ukusuka e-Irkutsk. Le yindlu yomthi enemigangatho emibini ene-banja / sauna, esetyenziswa kuphela ziindwendwe zethu.
Kwindlu yeendwendwe zethu unesauna yakho kunye nendawo yomlilo esezantsi, kunye nendlu yangasese kunye neshawari. Ngaphezulu unegumbi lokulala elikhulu, elahlulwe kwiindawo ezimbini. Unokufumana ibreakfast kwindlu yethu enkulu kwaye ujonge ifama yethu yebhayoloji okanye uthathe inxaxheba kumafama ethu yonke imihla. Sinezilwanyana ezininzi kwifama yethu kunye negadi enkulu yemifuno. Ubisi olutsha lwebhokhwe, amaqanda kunye nemifuno enencasa zisoloko zikhona kwiindwendwe zethu - kuphela igadi ephilayo neyendalo. Ungasebenzisa isitiya esihle ukwenza ibarbecue umzekelo okanye ubase nje umlilo ngaphandle kwaye wonwabele inzolo kwifama yethu.
Sihlala kwindlu enkulu ecaleni kwendlu yeendwendwe kwaye sihlala sikhona, ukuba unemibuzo okanye ufuna into ethile